Akwụkwọ nke Lara Albert na Martech Zone |
Edemede site na Lara Albert
Lara bụ onye isi oche nke Global Marketing na Njikọ ụwa ebe ọ na-eburu ibu ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ ma na-eduga ahịa nnweta maka ngwaahịa ahịa nke ụlọ ọrụ. N'oge gara aga ọ na-enwe ọkaibe akara njikwa na ngwaahịa ahịa ọrụ na Kraft Foods, America Online na VeriSign.
Amplero: Szọ mara mma iji belata ndị ahịa
Wednesday, September 23, 2015 Na Tọzdee, Septemba 22, 2015 Lara Albert
Mgbe a bịara n'ịbelata iwe ndị ahịa, ihe ọmụma bụ ike ọkachasị ma ọ bụrụ n'ụdị nghọta omume bara ụba. Dị ka ndị ahịa anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji ghọta etu ndị ahịa si akpa agwa na ihe kpatara ha ji apụ, ka anyị nwee ike igbochi ya. Mana ihe ndị na-ere ahịa na-enwetakarị bụ nkọwa nkọwa kama ịbụ amụma ziri ezi nke ihe egwu. Yabụ kedu ka ị ga - esi bute nsogbu a? Kedu ka ị si ebu amụma onye
Ruo ọtụtụ iri afọ ndị ahịa na-anwale A / B iji chọpụta irè nke onyinye na ị nweta nzaghachi ọnụọgụ. Ndị ahịa na-eweta nsụgharị abụọ (A na B), tụọ ọnụego nzaghachi, chọpụta onye mmeri, wee nyefee onye ọ bụla onyinye ahụ. Ma, ka anyị chee ya ihu. Approachzọ a dị nwayọ nwayọ, na-agwụ ike, na enweghị ezighi ezi - ọkachasị mgbe ị tinyere ya na ekwentị. Ihe onye ahia ahia choro n'ezie bu uzo iji choo ezigbo onyinye